Maromaro ny mpizahatany frantsay nitsidika an'i Moskoa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maromaro ny mpizahatany frantsay nitsidika an'i Moskoa
Ny mety ho fizahantany any Moskoa dia noresahina tao amin'ny IFTM Top Resa 2018 ”any Paris. Inessa Grig, lehiben'ny fandrindrana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ao amin'ny Departemantan'ny Fanatanjahantena sy fizahan-tany any Mosko, dia nilaza tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety momba ny fizahan-tany frantsay sy ny mety ho fizahan-tany any Mosko.
Maherin'ny 130 000 ny olona frantsay no nitsidika ny renivohitr'i Russia tamin'ny faran'ny taona 2017. 40% amin'izy ireo no nitsidika an'i Mosko satria mpizahatany, 20% no nitsidika manokana. Herewith, tao anatin'ny 6 volana voalohany tamin'ny taona 2018, dia mpizahatany frantsay 203 000 mahery no tonga tao Mosko avy any Frantsa. I Frantsa dia iray amin'ireo firenena dimy voalohany manana mpitsangatsangana avo indrindra any Moskoa. Ahitana an'i Shina, Alemana, Netherlands ary Etazonia ihany koa ny lisitra.
«Isan-taona dia mahita ny fizotran'ny mpizahatany isika, tonga any Moskoa, miakatra. Tamin'ny 2017 ny fitomboan'ny fizahan-tany avy any Frantsa dia nitombo 33% raha ampitahaina amin'ny 2016. Raha atotaly, tamin'ny 2017, 21.6 tapitrisa ny fahatongavan'ireo mpizahatany tonga tany Moskoa ”, hoy i Inessa Grig, lehiben'ny fandrindrana ny fizahan-tany momba ny fizahantany ao amin'ny Departemantan'ny Sport sy ny fizahantany. an'i Moskoa.
Vokatry ny fivoaran'ny fotodrafitrasa fitaterana tao anatin'ny 7 taona lasa i Moskoa dia tafakatra 14 ny toerana faha-6 amin'ny lisitry ny tanàna misy fotodrafitrasa fitaterana tsara indrindra. Nipoitra tao an-tanàna ireo gara vaovao sy MCR, vita ny làlam-by vaovao ary novaina ny arabe mpandeha an-tongotra. Ny rafitry ny fitaterana eto an-drenivohitra dia iray amin'ireo tsara indrindra eran'izao tontolo izao miaraka amin'i Madrid, London, Chicago, Seoul ary Hong Kong. Ankoatr'izay, ny halavan'ny lalan'ny bisikileta ao Moskoa dia nitovy tamin'ny tao Tokyo ary ankehitriny dia mitovy amin'ny 230 km.
Hetsika an-tanana ho an'i Lombok: kaonseritra fiantrana ho an'ireo iharan'ny horohoron-tany
5 minitra lasa izay